လိင်တူချစ်သူတွေရဲ့အခွင့်အရေးနှင့်ဥပဒေများ | USAHello ကနေလူ့အဖွဲ့အစည်းကိုနှင့်ယဉ်ကျေးမှုသတင်းအချက်အလက်များ | USAHello
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌, လိင်တူချစ်သူလူဦးတိကျတဲ့အခွင့်အရေးရှိသည်. တချို့ကအခွင့်အရေးများကိုသင်နေထိုင်ပေါ်တွင်မူတည်. အလုပ်မှာလိင်တူချစ်သူများအခွင့်အရေးနှင့် ပတ်သက်. Read, အိုးအိမ်အခွင့်အရေးများ, Anti-နိုင်ကျင့်ဥပဒေများ. လိင်တူချစ်သူလူတို့အဘို့တရားဥပဒေဆိုင်ရာကာကွယ်မှုတွေအကြောင်းထွက်ရှာမည်.
IStock / အပြည်ပြည်သွားကုန်သွယ်ရေး
လိင်တူချစ်သူ လိင်တူချစ်သူများအတွက်ရပ်တည်, လိင်တူချစ်သူ, ရိုးရိုး, လိင်သို့မဟုတ်တယောက်နှင့်. အကြောင်းကို Read လိင်တူချစ်သူနှင့်ပိုပြီးအဓိပ္ပာယ်, ထိုကဲ့သို့သော queer အဖြစ်, မေးခွန်းထုတ်နှင့် intersex. ခွဲခြားဆက်ဆံခံရမှု ဘာလို့လဲဆိုတော့သင့်ရဲ့အသက်ကွဲပြားခြားနားကုသခံနေရနည်းလမ်းများ, လိင်, ကျား, မ, သို့မဟုတ်လိင်. ဒါဟာ LGBTQ အသိုင်းအဝိုင်းထံမှလူတို့တဘက်၌ခွဲခြားမှုဖို့ USA တွင်ပညတ္တိကျမ်းဆန့်ကျင်. သို့သော်လူတိုင်းမဥပဒေများအောက်ပါအတိုင်း, နှင့်လိင်တူချစ်သူအသိုင်းအဝိုင်းဆီသို့သဘောထားတွေအားလုံးတိုင်းပြည်အပေါ်ကွဲပြားခြားနားကြသည်. ဒါဟာရန်အရေးကြီးပါသည် ဥပဒေများသင့်ရဲ့ပြည်နယ်တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာသိပါ.
သင့်ရဲ့အလုပ်ရှင်မဟုတ်နိုင် လိင်တူချစ်သူတွေရဲ့ဖြစ်ခြင်းများအတွက်သင်တို့တဘက်၌ခွဲခြားမှု. အားလုံးန်ထမ်းကိုအောက်ပါအခွင့်အရေးရှိသည်:
သင့်ရဲ့အလုပ်ရှင်သင်သည် LGBT ရှိမရှိအကြောင်းပြောဆိုရန်သင့်အားအတင်းမနိုင်.
ဤအခြေခံအခွင့်အရေးများထက် ကျော်လွန်., အများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိကဝန်ထမ်းများကိုများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအခွင့်အရေးများရှိပါတယ်. ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများအဆိုပါခရိုင်များအတွက်အလုပ်လုပ်, ပြည်နယ်, သို့မဟုတ်အမျိုးသားရေးအစိုးရဥပမာ - ဒေသခံတစ်ဦးအများပြည်သူကျောင်းတွင်. ပုဂ္ဂလိကဝန်ထမ်းများကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်အလုပ်မလုပ်, ထိုကဲ့သို့သောစက်ရုံများသို့မဟုတ်စတိုးဆိုင်အဖြစ်.
ဥပဒေများကိုမိမိတို့၏ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာများအတွက်ပစ်ခတ်ခံရခြင်းမှအများပြည်သူန်ထမ်းအားကာကွယ်ရန်. သင်တို့မူကားတစ်ဦးပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်, သင့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်အနှောင့်အယှက်အကြောင်းကိုကွဲပြားခြားနားသောစည်းမျဉ်းများနှင့်အလုပ်ရပ်များရှိစေခြင်းငှါ. သင်သည်သင်၏အလုပ်စတင်နိုင်သည့်အခါ, သငျသညျမေးခွန်းများကိုရှိပါကသင့်ရဲ့လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဌာနစကားပြော. သူတို့ကပုဂ္ဂလိကသင့်ရဲ့မေးခွန်းများကိုနှင့်သတင်းအချက်အလက်စောင့်ရှောက်မည်.
အဆိုပါလိင်တူချစ်သူအသိုင်းအဝိုင်းအတွက်ပြည်သူ့ဖြောင့်ကလူထက် HIV ပိုး၏မြင့်မားသောနှုန်းရှိ. HIV ပိုးသည်သင်၏ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကိုတိုက်ဖျက်မယ့်ကူးစက်တတ်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာ AIDS ရောဂါလို့ခေါ်တဲ့နာမကျန်းဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်ပါတယ်. HIV ပိုးနှင့်အတူပြည်သူ့ဆရာဝန်ကိုသွားဖို့နဲ့သူတို့ကပင်ပန်းလျှင်အားလပ်ချိန်ယူဖို့အချိန်လိုအပ်ပါတယ်. သငျသညျချိန်းသွား paid အချိန်ကိုချွတ်ယူနိုင်ပါသည်. သငျသညျကိုကောင်းစွာခံစားကြသည်မဟုတ်လျှင်သင်အကူအညီတောင်းနိုင်ပါတယ်. သင့်ရဲ့သူဌေးဟုတ်ကဲ့ပြောပါရန်ရှိသည်ပါဘူး.
သငျသညျ HIV ပိုးရှိပါက, အများဆုံးအလုပ်ခွင်ပုဂ္ဂလိကသင့်ရဲ့ status ကိုစောင့်ရှောက်ရန်ရှိသည်. သငျသညျ HIV ပိုးအပြုသဘောလျှင်သူတို့ကအလုပ်၏အပြင်ဘက်တွင်သည်အခြားဝန်ထမ်းသို့မဟုတ်လူတွေကိုမပြောနိုင်. ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့အလုပ်ရှိပါတယ်လျှင် ထက်ငယ်သော 15 လူထု, သင့်ရဲ့သူဌေးဒီပုဂ္ဂလိကကိုစောင့်ရှောက်ရန်ရှိသည်ပါဘူး.
သငျသညျ HIV ပိုးရှိသည်ကြောင့်သင့်ရဲ့သူဌေးကိုသင်ပစ်ခတ်မနိုင်. သင်သည်သင်၏အလုပ်လုပ်ဖို့လည်းနေမကောင်းလျှင်ဒါပေမဲ့သူတို့ကသငျသညျပစ်ခတ်နိုင်ပါတယ်. ဒါကအားလုံးအများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိကဝန်ထမ်းများကိုများအတွက်မှန်.
သငျသညျရှိပြီးတရားမဝင်နေထိုင်သူနေတယ်ဆိုရင်, သင်တို တူညီတဲ့ သည်အခြားလိင်တူချစ်သူန်ထမ်းအဖြစ်အခွင့်အရေးများ. အလုပ်ခွင်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုစောင့်ကြည့်သောအေဂျင်စီသင့်ရဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်မှာမကြည့်နိုင်ပါတယ်. သငျသညျခွဲခြားဆက်ဆံမှုသတင်းပို့မယ်ဆိုရင်သင့်ရဲ့အလုပ်ရှင်သငျသညျကိုအပြစ်ပေးလို့မရပါဘူး. ဒါကတရားပေတည်း. ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့အလုပ်ရှင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးန်ဆောင်မှုရန်သင့်အားသတင်းပို့စေခြင်းငှါ,. ဒီအခွင့်မပြုပါ, သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံကဖြစ်ပျက်. အလုပ်မှာအထောက်အထားမဲ့အခွင့်အရေးများအပေါ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များရှာပါ.
အကွောငျး 50% အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိလိင်တူချစ်သူများလူများသူတို့ခဲ့ကြပြီဟုပြော အိမ်ရာရှာနေသည့်အခါခွဲခြားဆက်ဆံ. အိမ်ရာအခွင့်အရေးများတိုင်းပြည်နယ်အတွင်းတူညီနေကြသည်မဟုတ်.
သငျသညျလိင်သို့မဟုတ်လိင်တူချစ်သူကြောင့်လူတွေကစွန့်ခွာရန်သင့်အားအတင်းမနိုင်. သင်တစ်ဦးငှားရမ်းသို့မဟုတ်စာချုပ်ရှိပါက, သငျသညျနေဖို့အတှကျဥပဒေရေးရာဖြစ်ပါသည်.
လိင်တူချစ်သူတွေရဲ့လူတွေအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ဖို့ပိုများပါတယ်. သင်လက်ရှိအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ကြပါလျှင်, မင်းတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး. သငျသညျနေ့ချင်းညချင်းနေတဲ့အမိုးအကာရှာလို့ရပါတယ်. လိင်တူချစ်သူတွေရဲ့အိုးအိမ်များနှင့်အမိုးအကာ၎င်းတို့၏လိပ်စာများကိုထုတ်ဝေရန်မပြုစေခြင်းငှါ. ဒီအရှိနထေိုငျလူများ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုကာကွယ်ပေးရန်ဖြစ်ပါသည်. သင့်ရဲ့ အနီးဆုံးလိင်တူချစ်သူအသိုင်းအဝိုင်းစင်တာ သငျသညျစာရင်းမကြောင်းတစ်အမိုးအကာကိုကူညီရှာဖွေစေခြင်းငှါ. သူတို့ကအစသင်ပိုမိုရေရှည်အိုးအိမ်ကိုကူညီရှာဖွေစေခြင်းငှါ.
အန္တရာယ်ကင်းသောနေရာ အရေးပေါ်အကူအညီနဲ့နှင့်လုံခြုံရေးလိုအပျသူလူငယ်များများအတွက်အမျိုးသားရေးအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်. ကို Safe Place လိင်တူချစ်သူလူတွေကိုအရေးပေါ်အတွက်သွားနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာ '' ကို Safe နေရာများ '' အဖြစ်အဖွဲ့အစည်းများတံဆိပ်များ. သောအရပ်တို့ကိုမစာကြည့်တိုက်ဖွစျစနေို, မီးဘူတာ, လူမှုဝန်ဆောင်မှု, နှင့်ပိုပြီး. သူတို့ကဘေးကင်းလုံခြုံသငျသညျစောငျ့ရှောကျနှငျ့သငျကူညီကြမည်. သူတို့သည်သင်၏ပြဿနာအားဖြင့်သင်တို့ကိုမကူညီနိုင်လျှင်, သူတို့လုပ်နိုင်သူကိုတစ်စုံတစ်ဦးကိုတွေ့လိမ့်မည်.
အနိုင်ကျင့်စော်ကားမှုနှင့် ပတ်သက်. စကားပြောဖို့အသုံးပြုတဲ့ဘုံစကားလုံးဖြစ်ပါသည်. အနိုင်ကျင့်ယုတ်အမူအရာမလိုချင်တဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်မဆိုကြင်နာဟုပါဝင်သည်. တစ်စုံတစ်ဦးကအွန်လိုင်းယုတ်သို့မဟုတ်ခြိမ်းခြောက်မက်ဆေ့ခ်ျပို့ပေးသည့်အခါဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုတို့သည်ဖြစ်ပါသည်. ဤသည်များသောအားဖြင့် Facebook ကဲ့သို့သောလူမှုမီဒီယာမှတဆင့်ဖြစ်ပျက်.
အနိုင်ကျင့်မည်သည့်အသက်လူတွေကိုဖြစ်ပျက်နှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံတို့တွင်တစ်ဦးလေးနက်ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ပါတယ်. တွင် 21 ပြည်နယ်နှင့်ကိုလံဘီယာ၏ခရိုင်, ဒါဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ကျားသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်၏တစ်စုံတစ်ဦးက bully ဖို့ပညတ်တိကမျြးဆန့်ကျင်. တစ်စုံတစ်ဦးကသင့်ရဲ့အလုပ်ခွင်၌သငျ bullying လျှင်, သင့်ရဲ့မန်နေဂျာကိုပြောပြ.
သင့်ကလေးကျောင်းတွင်အနိုင်ကျင့်ခံရလျှင်, သင်သည်သူတို့၏ဆရာစကားပြောသင့်တယ်. သငျသညျအနိုင်ကျင့်တရားမဝင်ရှိရာပြည်နယ်မှာနေထိုင်မပြုစေခြင်းငှါ. ဒါပေမယ့်ပင်ထိုကဲ့သို့သောဥပဒေများမပါဘဲ, ကျောင်းများတွင်၎င်းတို့၏ကျောင်းသားများနှင့်ဝန်ထမ်းများကာကွယ်ပေးရမယ်. ကျောင်းစာအုပ်အရာရှိများကနိုငျကငျြ့စကားပြောပါလိမ့်မယ်. ထိုပြဿနာကိုအလေးအနက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်, အဆိုပါနိုငျကငျြ့ဖြစ်ကောင်းအပြစ်ပေးရလိမ့်မယ်.
ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းများခွဲခြားဆက်ဆံမှုကြုံတွေ့ကြသူလူတို့အဘို့အမှုပေါင်းယူ. ယေဘုယျအားအဖွဲ့အစည်းများနှင့်လိင်တူချစ်သူအဖွဲ့အစည်းများရှိပါတယ်. လိင်တူချစ်သူတွေရဲ့အဖွဲ့အစည်းများတိကျတဲ့လိုအပ်ချက်များကိုပံ့ပိုးကူညီခြင်းနှင့်လိင်တူချစ်သူအသိုင်းအဝိုင်းများအတွက်အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ပေး.
Lambda ဥပဒေရေးရာအကြီးမားဆုံးအမျိုးသားရေးလိင်တူချစ်သူဥပဒေရေးရာအကူအညီများအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်. Lamda ဥပဒေရေးရာရဲ့ helpdesk သင့်အမှုအားပြန်လည်သုံးသပ်ရန်နှင့်ဒေသခံကိုယ်စားလှယ်များရန်သင့်အားဆက်သွယ်နိုင်သည်.
ရှိ ACLU သူ၏အခွင့်အရေးကိုစော်ကားလျက်ရှိသည်လူတွေကိုအခမဲ့ဥပဒေရေးရာအကူအညီပေးသည်. ရှိ ACLU လိင်တူချစ်သူများအခွင့်အရေးများအတွက်အစီအစဉ်များရှိပြီးနှောင့်ယှက်ခဲ့ကြသူလိင်တူချစ်သူများကလူကိုကိုယ်စားပြုတယ်. သငျသညျဥပဒေရေးရာအကူအညီလိုပါလျှင်, သင့်ရဲ့အနီးဆုံး ACLU တည်နေရာကိုရှာဖွေ.